Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » WTTC: miroborobo ny sehatry ny fizahantany afrikanina
Miroborobo ny fitsangatsanganana sy fizahantany any Afrika, mitombo 5.6% amin'ny taona 2018 raha ampitahaina amin'ny salan'isa manerantany 3.9% sy ny tahan'ny toekarena afrikanina 3.2%. Ity dia mametraka an'i Afrika ho faritra fizahantany faharoa haingana indrindra ao ambadiky ny Azia-Pasifika ihany.
Ny fitomboana toy izany dia hazavaina amin'ny ampahany amin'ny fitsangatsanganana ataon'i Afrika Avaratra amin'ny krizy fiarovana ary koa ny fampandrosoana sy fampiharana ny politika izay mampiroborobo ny fanamorana ny dia.
Nandritra ny 25 taona mahery, ny World Travel & Tourism Council (WTTC), izay misolo tena ny sehatra tsy miankina manerantany amin'ny Travel & fizahan-tany, dia namokatra fikarohana manankery momba ny fandraisana anjara ara-toekarena ao amin'ity sehatra ity. Ny fikarohana dia mampiseho koa fa amin'ny taona 2018:
Ny Travel & fizahan-tany dia nanolotra 194.2 miliara dolara ho an'ny harinkarenan'ilay faritra, izay misolo tena ny 8.5% amin'ny harin-karena faobe ao amin'ny kaontinanta
Nanome asa Afrikanina 24.3 tapitrisa ny sehatra, na 6.7% amin'ny asa manontolo.
71% amin'ny fandaniana fizahan-tany manerana an'i Afrika dia entin'ny fialamboly ary orinasa 29%
Ny fandaniana ao an-trano dia mitentina 56% amin'ny toekarena fizahan-tany raha 44% kosa ho an'ny iraisam-pirenena
Ny fandaniana fizahan-tany iraisampirenena dia 9.6% amin'ny totalin'ny fanondranana any amin'ny faritra, mitentina 58.5 bn $
Misongadina i Ethiopia fa tsy ny harinkarena fitetezana haingana indrindra any Afrika fa ny an'izao tontolo izao, izay nitombo 48.6% tamin'ny taon-dasa ho $ 7.4bn. Marihina fa ny fandaniana iraisam-pirenena momba ny fitsangatsanganana sy fizahantany dia nahatratra 61.0% amin'ny fanondranana any ivelany. Ity fitomboana mahavariana ity dia azo lazaina, amin'ny ampahany, amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'i Etiopia amin'ny maha foibe fitaterana isam-paritra sy ireo politikam-pialan-tsasatra visa tato ho ato.
Avy eo, ny sehatry ny fizahantany any Egypt dia naneho faharetana lehibe, nitombo 16.5% tamin'ny taon-dasa tamin'ny fandaniana nataon'ny mpitsidika iraisam-pirenena ho an'ny 27.3% amin'ny fanondranana. Ity dia manaraka ny fanatsarana ny filaminana eto amin'ny firenena sy amin'ireo toeran-kaleha toa an'i Sharm El-Sheikh, manampy amin'ny fitaomana ny mpizahatany iraisam-pirenena hiverina any amin'ny morontsiraka avaratra.
Ny filoha & CEO an'ny WTTC, Gloria Guevara, dia naneho hevitra hoe:
"Derainay ireo mpitarika fizahan-tany any Afrika izay manampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisana, mampiroborobo ny fanamorana ny dia ary miantoka ny fiarovana ny mpandeha - ireo fepetra rehetra ireo dia miteraka fitomboana faratampony; ilay karazana fitomboana hitanay ankehitriny manerana ny kaontinanta ary manome asa tsara an-tapitrisany. ”
WTTC no vatana maneho ny sehatra tsy miankina Travel & fizahan-tany manerantany. Ny mpikambana dia misy CEOs an'ny orinasa Travel & fizahan-tany, toeran-kaleha ary fikambanana indostrialy miray amin'ny Travel & fizahantany
WTTC dia manana tantaram-pikarohana nandritra ny 25 taona hamaritana ny fiantraikan'ny sehatra ara-toekarena ao amin'ny firenena 185. Ny Travel & fizahan-tany dia mpamily fototra amin'ny fampitomboana ny vola sy ny toekarena manerantany. Ny sehatra dia manome 8.8 tapitrisa dolara amerikana na 10.4% amin'ny harin-karena faobe (GDP) manerantany, ary mitaky asa 319 tapitrisa na iray amin'ny folo amin'ireo asa rehetra eto ambonin'ny planeta.